/g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); }); လင္းဦး(စိတ္ပညာ) _ Lin Oo: ကျွန်ေတာ်နှင့် ထိုုြပဿနာများ
ကျွန်ေတာ် ေြပာခဲ့ပါေသးတယ်။ ကျွန်ေတာ့် Gmail ကို တစ်ေယာက်ေယာက်ကေတာ့ Hack ထားတယ်ဆိုတာ… ။ အဲ့ဒီေြပာခဲ့တုန်းကေတာ့ ေတာ်ေတာ်များများက မယံုြကပါဘူး။ အခုေတာ့ ကိုယ်တိုင် ြကံုေတွေတာ့မှ သူတို့က ယံုသွားြကတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လေလာက်ကတည်းက Gtalkမှာ ကျွန်ေတာ့်မေြပာဘဲ သူ့ဟာသူ ေအာ်တို ေြပာေနတာကို ြကံုခဲ့ရတာပါ။ secondary mail ထားသလားဆိုေတာ့ ကျွန်ေတာ် မထားပါဘူး။ ကျွန်ေတာ်blogspot ကလည်း ဒီအေကာင့်နဲ့ပဲ လုပ်ထားတာပါ။
ပထမပိုင်းတုန်းကေတာ့ blogspotထဲကို ဘာမှ မလုပ်ေသးပါဘူး။ အခုေနာက်ပိုင်း အထဲကိုပါ၀င်ြပီး လုပ်ကိုင်လာတာကို ေတွ့ရပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်မေြပာတဲ့စကားေတွကို ေြပာလို့ ဖျက်ခဲ့ရေပါင်း မနည်းေတာ့ပါဘူး။ ကျွန်ေတာ့်ရဲ့ password ကို ခဏ ခဏ ေြပာင်းခဲ့တာပါပဲ။ ဒါေပမယ့် သူက ၀င်ေနတာပါပဲ။ ြပီးေတာ့ ကျွန်ေတာ်က G talk ဖွင့်ထားေပမယ့် စကားေြပာတာနည်းပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက်ေတွရေအာင် ဖွင့်ထားတာများပါတယ်။ အဲ့ဒါကို ကျွန်ေတာ်နဲ့ Addထားတဲ့သူေတွ အသိဆံုးပါ။ ြကာလာေတာ့ ကျွန်ေတာ် စိတ်ညစ်လာမိပါတယ်။ ၂၂ ရက်ေန့တုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ေယာက်က ေြပာပါတယ်။ သူ့နဲ့ Chat ေနကျ လူတစ်ဦးနဲ့ ေြပာေနရာက ထိုလူက စကားလံုး ရိုင်းရိုင်းများသံုးလာပါတယ်တဲ့။ သူက ကျွန်ေတာ်ေြပာတာ ြကားဖူးေနေတာ့ နည်းနည်းေတာ့ ထိတ်လန့်သွားမိပါတယ်တဲ့။ ြပီးေတာ့ ေနာက်ဆံုး တစ်ဖက်လူမှ သူ့ကိုသူ Hackerကွလို့ ေြပာသွားြပီး ထွက်သွားပါတယ်တဲ့။
ကျွန်ေတာ် စဉ်းစားမိတာပါ။ ကျွန်ေတာ်တို့ကို Hackလို့ ဘယ်လိုအကျိုးေကျးဇူးများ ရနိုင်မလဲလို့ေပါ့။ စမ်းြပီးလုပ်ေနတာလား။ တစ်စံုတစ်ရာ အေြကာင်းေြကာင့်လားေပါ့။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ နည်းပညာပိုင်မှာ အားနည်းပါတယ်….။ Hacker ? Hack တယ်ဆိုတာ ြကားေတာ့ ြကားဖူးပါတယ်။ တကယ် အြပည့်အစံုကိုေတာ့ မသိပါဘူးခင်ဗျာ။ ကျွန်ေတာ်ေြပာတာေတွက လူပိန်းေြပာတာေတွပါ။ သိတယ်ဆိုရင် ေြပာသွား၊ ေထာက်သွားြကပါ။ မြဖစ်နိုင်ဘူးလို့ေြပာခဲ့တဲ့ လူေတာ်ေတာ်များများ အခု ေထာက်ခံေနြကပါြပီ။ မေထာက်ခံလို့လည်း မရေတာ့ဘူးေလ။ သူတို့ကိုယ်တိုင် Hack ခံထားရတာကိုး။ အဲ့ေတာ့ ေြပာချင်တာက အခုမိတ်ေဆွရဲ့ ေဘးက သူငယ်ချင်းကိုလည်း ေမးြကည့်ပါဦး။ Hack ခံထားရသလားဆိုတာ။ ကျွန်ေတာ်လည်း စိတ်ညစ်စရာေတွများလာေတာ့ အခုတစ်ေလာ မေရးြဖစ်ေတာ့ဘူး။blog ေတွကို မလည်ြဖစ်ေတာ့ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ေတာ်တယ်၊ Hackerလို့ ခံယူထားတယ်လား။ ဒါဆို ကျွန်ေတာ်နဲ့ အြပင်မှာ ေတွ့ချင်ပါတယ်။ ခင်ဗျား မေကျနပ်တာေတွကို ေြပာစမ်းပါ။
ေနာက်ြပဿနာတစ်ခုက ကျွန်ေတာ် ြပည်ေကာလိပ်မဂ္ဂဇင်းမှာ ေရးခဲ့တဲ့ ကဗျာရှည် ြပဿနာတစ်ခုပါ။ ကဗျာနာမည်က “အသည်းေလာ့ကတ်သီးေလးနဲ့ လည်ဆွဲေလး” ပါ။ အဲ့ြပဿနာကေတာ့ မဂ္ဂဇင်းတိုက်နဲ့ရှင်းရမှာပါ။ ြပီးေတာ့ ကျွန်ေတာ့်ရဲ့ ကျန်းမာေရးပါ။ ကျွန်ေတာ့်ရဲ့ ကျန်းမာေရး သိပ်မေကာင်းပါဘူး။ မေကာင်းတာကလည်း ကျွန်ေတာ်ကိုယ်တုိင် မဆင်ြခင်လို့ ြဖစ်တာပါ။ ကျွန်ေတာ် ေကာ်ဖီနဲ့ လက်ဖက်ရည် အရမ်းေသာက်ပါတယ်။ ေတာ်ေတာ်ေလးကိုများပါတယ်။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ ေကာ်ဖီမစ်ေတွကို ေသာက်တာပါ။ တစ်ေန့ကို (၁၀)ထုပ်ေလာက် ေသာက်ပါတယ်။ ဒါဟာ တစ်ေန့တာေသာက်တာပါ။ တစ်ခါတစ်ေလ အဲ့ထက် ပိုေသာက်ပါတယ်။ ေကာ်ဖီစွဲသွားရတဲ့ အေြကာင်းကေတာ့ ၊ ကျွန်ေတာ်တို့ေတွ သီးချင်းေတွေရးြကတယ်၊ ဆရာ့အိမ်မှာ ေလ့လာြကတယ်။ ကိုယ့်အားလပ်ချိန်ကလည်း ညကျမှဆိုေတာ့ အိပ်ငိုက်မှာဆိုးလို့ ေကာ်ဖီေတွေသာက်တာကေန အကျင့်ပါသွားတာပါ။ ြပီးေတာ့ မေသာက်ရရင် မေနနိုင်ေတာ့ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းေတာ်ေတာ်များများက ေပါ့ဆိမ့်လိုမျိုး အေသာက်များေပမယ့် ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ချိုဆိမ့် သိပ်ြကိုက်ပါတယ်။
ကျွန်ေတာ် ြကိုးစားပါဦးမယ်။ ဆက်ေရးြဖစ်ေအာင်ေပါ့။ ကျွန်ေတာ်က အြမဲတမ်းေရးေနရမှ ေကျနပ်တာ။ ေနာက်ထပ်တစ်ခု ေြပာချင်ပါေသးတယ်။ အဲ့ဒါကေတာ့ ကျွန်ေတာ့် blogspot ပိတ်ခံရြခင်းပါ။ ဟ……. ခင်ဗျား တစ်ေယာက်တည်း ပိတ်တာမှ မဟုတ်တာ ြမန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်သူမှ တိုက်ရိုက်ြကည့်လို့မရဘူး……… အဲ့လိုမျိုး ေြပာြကမှာပါ။ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ထက် ကျွန်ေတာ်က ပိုဆိုးပါတယ်။ ဘယ်ေနရာမှ မဖွင့်ေပမယ့် ဖွင့်ေပးထားတဲ့ တစ်ေနရာကေတာ့ ရိှပါတယ်။ အားလံုးသိြကမှာပါ။ ဒါေပမယ့် အဲ့ဒီ ဖွင့်ေပးထားတဲ့ ေနရာကေတာင် ြကည့်တာေတာင် ကျွန်ေတာ့် blogspot ဖွင့်လို့မရပါဘူး။ ကျန်တဲ့ မိတ်ေဆွများ blog ေတွကို ဖွင့်ြကည့်ပါတယ်။ အားလံုး ပွင့်ေနပါတယ်။ အဲ့ဒီကေန ဖွင့်လို့မရတဲ့ blogspotေတွ ရိှပါေသးတယ်။ ကိုရန်ေအာင် blogပါ။ ကျန်ပါေသးတယ် ။ မေရးြပေတာ့ပါဘူး။
တစ်ေန့က ကျွန်ေတာ့်ဦးေလးမိတ်ေဆွနဲ့ စကားေြပာြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်ဦးေလးက ကျွန်ေတာ့်ေမလ်းနဲ့ သူ့ဆီ ေမလ်းပို့ခဲ့တာပါ။ ဒါနဲ့ သူက ကျွန်ေတာ့်ကို G Talk မှာ Add လိုက်တယ်ေပါ့ဗျာ။ အဲ့မှာ မင်းက အွန်လိုင်းမှာ ဘာေတွလုပ်ေနတာလဲလို့ ေမးပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်က blogေရးေနပါတယ်လို့ ေြဖလိုက်ေတာ့….. သူက ြပန်ေြပာပါတယ်။ blog ေရးတာ အစိုးရက မြကိုက်ပါဘူးတဲ့ ခင်ဗျာ။ ြပီးေတာ့ ကျွန်ေတာ့်ကို blogေရးတာ ရာဇ၀တ်မှုတစ်ခုကို ကျူးလွန်ေနသလိုမျိုး ေြပာြပေနြပီး မေရးဖို့ ေြပာပါတယ်။ ဆက်မေရးဖို့ပါ။
ဒီရက်ပိုင်း ြပဿနာေတွကေတာ့ ေတာ်ေတာ်ေလးကို စိတ်ရှုပ်ဖို့ေကာင်းပါတယ်။ ဆက်ေရးဖို့ေတာ့ ြကိုးစားမှာပါ။
Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Monday, June 30, 2008